မန္တလေးချမ်းမြရွှေပြည် ယာဉ်ရပ်နားစခန်း / ဒီလှိုင်းဝင်း / ဧရာဝတီ
By ဒီလှိုင်းဝင်း 26 April 2018
မန္တလေးခရိုင် ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် အတွင်းရှိ ချမ်းမြရွှေပြည် (ကျွဲဆည်ကန်) ကားကြီးကွင်း အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းများ ပြုလုပ် နိုင်ရန်အတွက် မေလအတွင်း၌ ယာယီယာဉ်ရပ်နားစခန်းသို့ စတင်ပြောင်းရွှေ့မှုများ ပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေး မြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီက သိရသည်။
“ကျွဲဆည်ကန်ကားကွင်းရဲ့ အနေအထားက တော်တော်လည်း မကောင်းတော့ဘူး၊ ပျက်ဆီးနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့ ပြုပြင်ပြီး အဆင့်မြှင့်တာပါ၊ တင်ဒါအောင်ထားတဲ့ mDCM ကုမ္ပဏီကဆောင်ရွက်မှာပါ၊ ကားကွင်းပြုပြင်နိုင်ဖို့ ယာယီကားကွင်း တခုလုပ်ပြီး ကားကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ ဂိတ်တွေရော ဆိုင်ခန်းတွေရော မေလအတွင်းမှာ အကုန်ရွေ့ဖို့ စီစဉ်ထားပါတယ်”ဟု မန္တလေးမြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီဝင် ဦးကျော်ဆန်းမြင့်က ပြောသည်။
ကျွဲဆည်ကန် ကားကြီးကွင်း အဆင့်မြှင့်တင်မှုများ လုပ်နေစဉ် ခရီးသွားပြည်သူများ အခက်အခ ဲမရှိ သွားလာနိုင်ရန် အတွက် ယာယီယာဉ်ရပ်နားစခန်း တခုထားရှိ ဆောင်ရွက်ပေးခြင်းဖြစ်ပြီး m. Development Corporation (Myanmar ) Co.,Ltdမှ ယာယီကားကွင်းကိုပါ တည်ဆောက်ပေးခြင်းဟု သိရသည်။
“ယာယီကားကွင်းက မြို့အထွက် တံခွန်တိုင်အဝိုင်းရဲ့ မြောက်ဘက်မှာ ပြုလုပ်ပေးသွားပါမယ်၊ မြေဖို့တာတွေ လုပ်နေပါပြီ၊ အဝေးပြေးယာယီအနေနဲ့ ၂နှစ်လောက်ကြာမှာပါ၊ ယာယီကားကွင်း အနေနဲ့ ဆောက်လုပ်ဖို့အတွက် ကုမ္ပဏီကို ပုံစံတောင်းပြီး ဆောက်လုပ်နေပါပြီ၊ ယာယီကားကွင်းပြီးတာနဲ့ ကားကွင်းကို ပြောင်းရွေ့သွားမှာပါ၊ အဲဒီလိုရွေ့ပြီးမှ ကျွဲဆည်ကန် ကားကွင်းကို အဆင့်မြှင့်သွားမှာပါ၊ မေလလောက်ကစပြီး ရွေ့ပြောင်း အဆင့်မြှင့် တင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်”ဟု ဦးကျော်ဆန်းမြင့်က ဆက်လက်ပြောသည်။
ချမ်းမြရွှေပြည်အဝေးပြေးကားကွင်း၏ သက်တမ်းသည် ယခုအခါ နှစ်ပေါင်းနှစ်ဆယ်ကျော်လာပြီဖြစ်ကာ စတင်စဉ်က ခရီးသည်တင်ယာဉ်လိုင်းများအပြင် ကုန်စည်ပို့ဆောင်ရေး လုပ်ငန်းများ၊ ပွဲရုံများ၊ ဂိုထောင်များပါရှိခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ခုနှစ်တွင် ကုန်စည် ပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ပွဲရုံများ၊ ဂိုထောင်များကို စွယ်တော်ဘုရားအနီးရှိ ကုန်စည်အဝေးပြေးကွင်းသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ သည်။
အဆိုပါ ကားကြီးကွင်း အဆင့်မြင့်တင်နိုင်ရန်အတွက် ၂၀၁၄ ခုနှစ် နှစ်ဆန်းပိုင်းက တင်ဒါခေါ်ယူခဲ့ရာ m. Development Corporation (Myanmar) Co.,Ltd (mDCM) ကုမ္ပဏီက တင်ဒါ အောင်မြင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၅ နှစ်ဆန်းပိုင်းတွင် စတင်ရန် လုပ်ဆောင်ရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သော်လည်း တည်ဆောက်မည့်ဒီဇိုင်းပါ ၁၂ ထပ် အဆောက်အဦသည် ချမ်းမြသာစည် လေယာဉ်ကွင်း၏ လေယာဉ်ပြေး လမ်းကြောင်းဖြင့် မလွတ်ခြင်းကြောင့် မူလရေး ဆွဲထားသည့်ဒီဇိုင်းပိုင်း ပြန်လည်ပြင်ဆင် ရေးဆွဲနေရသဖြင့် တည်ဆောက်ရေးအပိုင်း ကြန့်ကြာနေရခြင်းဟု သိရသည်။
“ကုမ္ပဏီအနေနဲ့ တည်ဆောက်မှုတွေကို စတင်ဖို့ လုပ်ဆောင်နေပါပြီ၊ လိုအပ်တာမှန်သမျှ ပြည့်စုံမှသာ စတင်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်၊ ချမ်းမြသာစည်လေဆိပ်မှာ လေယာဉ်တာဝါတိုင်ရှိနေတဲ့အတွက် လေကြောင်းကင်းလွတ်ခွင့်နယ်မြေအရ အမြင့် သတ်မှတ်ချက် ၅၁ ပေအထိပဲ ရရှိတာကြောင့် အထပ်မြင့်အနေနဲ့ ၅ ထပ်အမြင့်အထိ တည်ဆောက်သွားမယ်”ဟု mDCM ကုမ္ပဏီက တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
အဆိုပါကားကွင်းကို အဆင့်မြှင်တင်တည်ဆောက်နိုင်ရန် မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီနှင့် m. Development Corporation (Myanmar) Co.,Ltd. တို့အကြား လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ်ကို ၂၀၁၇ အောက်တိုဘာ ၁၀ ရက်နေ့က လက်မှတ်ရေးထိုး ချုပ်ဆိုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ကားကွင်း ကို နိုင်ငံတကာ စံသတ်မှတ်ထားသည့်နှုန်းများအတိုင်း ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်အတွင်း အပြီး တည်ဆောက်သွားမည်ဖြစ်၍ အမေရိကန် ဒေါ်လာ သန်း ၁၅၀ ကုန်ကျမည်ဖြစ်ကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေး ကော်မတီနှင့် m. Development Corporation (Myanmar) Co.,Ltd. ၏ သဘောတူစာချုပ်အရ သိရသည်။
ချမ်းမြရွှေပြည်အဝေးပြေးကားကွင်းအား အဆင့်မြှင်တင်ပြုပြင်ခြင်းပြုလုပ်ရာတွင် လေးထပ်ခွဲ၊ ငါးထပ်အမြင့် အဆောက်အဦများနှင့်အတူ ခရီးသည်တင်ယာဉ်များ ဆိုက်ရောက်ရာ နေရာ၊ ထွက်ခွာရာနေရာ၊ စူပါမားကတ်၊ရှောပင်းမောလ်၊ စားသောက်ဆိုင်များ၊ ကွန်ဒို၊ဟိုတယ် အစရှိသည်များ ပါဝင်မည်ဟု သိရသည်။
“လေယာဉ်ကွင်း စီမံခန့်ခွဲမှု ပုံစံအတိုင်း ကားတွေ ဆိုက်ရမယ့်နေရာ၊ ခရီးသည်ချမယ့် နေရာ၊ ခရီးသည်တွေ တက်စီးနိုင် မယ့်နေရာ စတဲ့ပုံစံ မျိုးနဲ့လုပ်သွားမယ်၊ လက်ရှိ အနေအထားအရ ဂိတ်ရှေ့မှာ ကားရပ်၊ ဂိတ်မှာလက်မှတ် ဝယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုး မဟုတ်ဘဲနဲ့ တချိန်တည်းမှာ ကားဘယ်လောက် ထွက်နိုင်မလဲပေါ် မူတည်ပြီး စီမံခန့်ခွဲမယ်၊ ခရီးသည်တွေအတွက် ကားစောင့်နေရင်းနဲ့ သက်သောင့်သက်သာ နေနိုင်အောင် လုပ်ထားပေးမယ်။ အဓိကတော့ ခရီးသွားတွေ အဆင့်မြင့်မြင့် သက်သောင့်သက်သာ နေလို့ရအောင် စီမံပေးမယ်”ဟု mDCM ကုမ္ပဏီက တာဝန်ရှိသူတဦးက ပြောသည်။
ချမ်းမြရွှေပြည်အဝေးပြေးကားကွင်းတွင် အဝေးပြေး မော်တော်ယာဉ်အသင်းပေါင်း ၉၆ သင်းရှိပြီး မော်တော်ယာဉ် အစီးရေ ၆၅၆ စီးဖြင့် ပေးဆွဲပေးနေကာ နေ့စဉ် အဝင်အထွက် ၅၀၀ စီး ရှိကြောင်း၊ အပြီးရောင်းချပြီး ဂိတ် ၂၁၃ ဂိတ်နှင့် မန္တလေး မြို့တော်စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီပိုင်ဂိတ် ၄၂ ဂိတ် စုစုပေါင်း ၂၅၅ ဂိတ်၊ ဈေးဆိုင်ခန်း ၁၀၀ ရှိကြောင်း၊ နေ့စဉ် ခရီးသွား ၄၈၀ဝ ကျော်ရှိကြောင်း မန္တလေးမြို့တော် စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ၊ အခွန်ဌာနရှိ စာရင်းများအရ သိရသည်။
မန္တလေးခရိုင်အတွင်း၌ အဝေးပြေးခရီးသည် တင်ယာဉ်ရပ်နားစခန်း ၅ ခုရှိသည့်အနက် ချမ်းမြရွှေပြည်ကားကွင်း (ကျွဲဆည်ကန်)ရှိ ယာဉ်လိုင်းများသည် မြန်မာနိုင်ငံ အထက်ပိုင်း၊ အောက်ပိုင်းနှင့် အရှေ့ပိုင်းရှိ မြို့များသို့ ထွက်ခွာရာ အဓိက ကားကွင်းတခုဖြစ်ပြီး ချမ်းမြရွှေပြည်အဝေးပြေးကားကွင်းအား ပထမဦးဆုံးအနေဖြင့် အဆင့်မြှင့်တင်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။